Hydorah: lalao indie vaovao ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Hydorah: lalao indie vaovao ho an'ny Linux
Ianareo izay mihetsika erak'izao tontolo izao lalao indies efa henonao ny Hydorah, lalao iray amin'ny karazana shoot'em up (na mamono ny martianina araka ny niantsoantsika azy ireo tamin'ny taona 80/90 😛)
Navoaka tamin'ny taona 2010 ity lalao ity avy amin'ny mpandefa programa indie fanta-daza Locomalito, mpanoratra firavaka indie hafa ary misy estetika Retro toa ny vao haingana Damn Castilla ary ny feon-kira nataon'ny fanta-daza Gryzor87. Ankehitriny programmer hafa, Nevat mikasa ny handefa azy io amin'ny Linux izy, ary indraindray amin'ny OS hafa izay manana tranomboky C compiler sy SDL.
Ny tetikasa dia mbola ao dingana alpha ary manao izany amin'ny fotoanany izy, ka manontany izy manampy Ho an'ny fivoaran'izy ireo.
Ny marina dia Hydorah dia lalao mahafinaritra, iray amin'ireo lalao izay mitondra antsika hiverina amin'ny taona 80 sy ny fiandohan'ny taona 90 raha namela ny fandoavam-bola tao amin'ny arcades, na ireo izay niaina ny firoboroboan'ity karazana ity (Gradius, R-Type, sns) ary azo antoka fa hahafaly olona mihoatra ny iray izany.
Avelako ianao haka sary vitsivitsy an'ny lalao amin'ny fanjakany ankehitriny:
Tranokalan'ny lalao tany am-boalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Hydorah: lalao indie vaovao ho an'ny Linux
Nevat dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny fampahafantarana ity tetikasa ity. Ny tena marina dia goavana tokoa ny fampandrosoana ity lalao ity ka izay no mahatonga olona maro tadiavina, hanafainganana ny fampandrosoana. Lalao mahafinaritra ity ary mendrika ny ho eo amin'ny sehatra rehetra azo atao.
Maneho hevitra fa lalao LocoMalito iray hafa, Abbaye des Morts dia nalefa tany Linux, Openpandora, Rapsberry, Caanoo, Wiz, sns.
Mamaly an'i Nevat
Tsy ilaina ^^
Tsy fantatro izany lalao izany. Avy eo ampidiniko izy ary atambatro, ary ho hitako raha indray mandeha ny zavatra mitovy amin'i Maldita Castilla, fa eo ambanin'ny divay dia miadana ny lalao
Manaraka anao amin'ny twitter aho ary raha vantany vao nahazo Abbey des morts ho an'ny linux dia nampidina azy aho. Ny lalao mahafinaritra sy ny kinova misy sary vaovao dia manome bonus mahafinaritra.
Hydora dia tsara ihany koa, sangan'asa locomalito talohan'ny nisehoan'i Maldita Castilla. Raha nahay nametraka programa aho dia azo antoka fa hitady fomba hanohanana aho. Asa tena tsara.
Mampatsiahy ahy ny Salamander na ny Nemesis izay nilalao tamin'ny msx sy ny msx2
Mandositra ahy ny ranomaso
Hadisoana amin'ny famolavolana http://i.imgur.com/tlXWOON.jpg raha mitohy ny fanitarana, ary mampihena ny zoom aho, dia tsy hitranga intsony izany ary raha manana azy amin'ny efijery feno koa aho.
Izaho dia efa nanangona azy, na izany aza ao amin'ny fizarana News dia milaza hoe: «15/04/2013 - Tsy misy fanavaozana ny SVN, satria manoratra« motera »(tsara, karazana) amin'ity lalao ity aho. Miaraka amina kaody izay ihany dia «hifindra» ny dingana rehetra amin'ny lalao aho. Manantena aho fa haneho zavatra faran'izay haingana 🙂 »
Tsara kokoa raha mifanerasera aminy ianao mba hahitanao ny fandehan'io motera io 😛
Lany daty ny fizarana vaovao, mea culpa.
Miaraka amin'ireo olona vaovao miditra amin'ny ekipa dia tapaka ny hevitra fa hilalao ny dingana isaky ny lalao ary avy eo dia hifandray amin'izy ireo. Hiezaka ny hitazona ny pejin'ny tetik'asa aho araka izay azo atao.
Na dia tsy mahay mandamina programa aza ianao dia afaka manampy amin'ny fomba hafa. Mitsikia!
Satria ny teny Anglisyiko dia fototra, raha tsy nanolo-tena hanampy ilay pejy aho, na dia afaka nanampy tamin'ny wiki aza aho hanavao ny fidirana amin'ny Espaniôla
Satria tiako ny lalao Retro, manantena aho fa misy tetikasa marobe toa ireny hitohy hivoaka sy ho an'ny Linux, RPG ary ireo sehatra misy tantara tena tsara ^^.
Lalao tsara. Inona koa, mampahatsiahy ahy izany rehefa nilalao tamin'ny findaiko taloha aho.
tompoko saeron dia hoy izy:
Vao haingana aho no liana tamin'ny fiezahana hamita ny lalao ity, fa rehefa hitako fa madio C izy io, tsy nisy orientation object, ary tsy nisy sprites rehetra dia niverina aho. Na izany aza, raha misy maro liana amin'ny fitondrana izany dia raharaha hafa izany. Raha lazainao amiko hoe aiza ianao no miresaka sy mivoatra angamba afaka manome tanana aho.
Valio amin'i lordSaeron
Tsy dia ratsy loatra i C ... manome anao fahalalahana hanao zavatra araka ny itiavanao azy: p
Matotra, raha liana ianao manorata ahy ao amin'ny dvlara-en-gmail.com, dia hanampy anao amin'ny vondrona aho.
Nanokana fotoana alohan'ny hamaliana aho satria tsy nahafantatra an'i locomalito na tamin'ny lalao nataon'izy ireo, saingy heveriko fa izany no loharano nilazana tsara indrindra nomen'ny Son Link ahy, mahatalanjona ny kalitaon'ny lalao, ary ny banga aterak'izy ireo! ! Nandany adiny 6 teo ho eo aho nilalao ny Maldita Castilla teo am-baravarankely mandra-pahavitako azy, mazava ho azy ny mahita olona ao amin'ny YouTube miaraka amina gameplays 45 min xD. Miaraka amin'i Gaurodan ao amin'ny Linux aho dia mifamatotra koa, ka raha afaka miara-miasa amin'ny zavatra hafa aho (ankoatry ny kaody noho ny tsy fandefasana programa) dia manana ny fanampiako izy ireo, manana ambaratonga anglisy aho, ka raha mila mandika zavatra ianao dia afaka manampy.
Azafady, fitaratra… avy any Cuba dia tsy miditra amin'ny kaody Google izahay.
takamoa !! tokony hanao ny tenantsika ho bot izay fitaratra amin'ny fangatahana isika. (hasiantsika cubot)
Lohahevitra tsara tarehy ho an'ny RazorQT
Ahoana ny fomba: Amboary ny olanao amin'ny ALC888 ao amin'ny Ubuntu12.04 sy ny derivatives